दुतावासमा ब्रेकफास्ट खुवाएर राजदूत रे ले मधेसी नेतालाई सोधे, मधेस आन्दोलनको तयारी के छ ? – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / समाचार / दुतावासमा ब्रेकफास्ट खुवाएर राजदूत रे ले मधेसी नेतालाई सोधे, मधेस आन्दोलनको तयारी के छ ?
दुतावासमा ब्रेकफास्ट खुवाएर राजदूत रे ले मधेसी नेतालाई सोधे, मधेस आन्दोलनको तयारी के छ ?
चैत १२ । वैशाखदेखि गर्ने भनिएको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको तयारीबारे मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले दूतावासमै गई भारतीय राजदूत रन्जित रेलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएका छन् ।
होली पर्वका अवसरमा राजदूत रेले विहीबार दूतावासमा बोलाएको ब्रेकफास्ट बैठकमा रादजूतको जिज्ञासापछि उनीहरुले त्यसबारे जानकारी दिएका आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
बैठकमा सहभागी मोर्चाका एक नेताका अनुसार राजदूत रेलाई अवको आन्दोलन राजधानीकेन्द्रीत हुने र पहाडी जनजातिहरुको समेत सहयोगमा ठूलाठूला प्रदर्शन गर्ने योजना र तयारी रहेको जानकारी दिइएको छ ।
राजदूत रेले ‘तपाईहरुले वैशाखदेखि फेसर प्रारम्भ गर्ने भनेको मधेस आन्दोलनको तयारी बारेमा के हुँदैछ ? भन्ने प्रश्न गरेको मोर्चाका नेताहरुले बताए । राजदूतले मोर्चाका ११ बुँदे मागबारे सरकारसँग भएको प्रगतिको विवरण पनि चाहेका थिए ।
Previous शेरबहादुरलाई सभापतिमा प्रस्ताव गरेका गुरुङ यसकारण भए असन्तुष्ट
Next प्रचण्डसँग मिल्नेमा वैद्य र बादलबीच खटपटः वैद्य विपक्षमा, वादको मिल्नुपर्ने तर्क